﻿ जाडो मौसममा अनुहारमा चमक कसरी ल्याउने ?
जाडो मौसममा अनुहारमा चमक कसरी ल्याउने ?
मानिसको सौन्दर्यता वर्णन गर्न अनुहारमा चमक ल्याउनु जरुरी हुन्छ । सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै अनुहारको सुन्दरतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी जाडो मौसममा अनुहारमा फुस्रोपना बढी हुने भएकाले ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ ।
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
आज घरघरमा तुलसीको विवाह गरिँदै
बीबीसी ‘मास्टर सेफ’ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा नेपालका सन्तोष साह